Egwurugwu Aluminom Didan Ọkwọ ụgbọala, Ọkwọ ụgbọala nnukwu ọkụ eletrik na-adọkpụ, ụgbọala na-arụ ọrụ ụgbọala na China
Nkọwa:Ọhụụ Aluminom Didan Ọkụ,Mmiri mmiri na-agba mmiri na-agba mmiri,Onye na-akwọ ụgbọala,Ọkwọ ụgbọala na-egbuke egbuke,,
Home > Ngwaahịa > 200-480Vac nnukwu eletriki na-agba ọsọ eletriki > Alụlị Aluminom IP67 480V Ọkpụkpọ Ntanye
Ngwaahịa nke Alụlị Aluminom IP67 480V Ọkpụkpọ Ntanye , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ọhụụ Aluminom Didan Ọkụ , Mmiri mmiri na-agba mmiri na-agba mmiri suppliers / factory, wholesale high-quality products of Onye na-akwọ ụgbọala R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
eduzi ike ike ugbu a 100W  Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-akwọ ụgbọ mmiri nke mmiri 100W  Kpọtụrụ ugbu a
100W 30-50Vdc Voltage 480Vac LED Driver  Kpọtụrụ ugbu a
240W 347V Ọkwọ ụgbọala na-enwu enwu  Kpọtụrụ ugbu a
480Vac 150W Ọkụ ụgbọ ala eletrik ukwu dị elu 150W  Kpọtụrụ ugbu a
LED Luminaire akwa voltaji Ọkwọ ụgbọala  Kpọtụrụ ugbu a
Obere Wallpack Light LED Driver  Kpọtụrụ ugbu a
Ọkụ ọkụ eletrik dị elu nke ọkụ ọkụ na-agba ọkụ 480V ọkwọ ụgbọala  Kpọtụrụ ugbu a
eduzi ike ike ugbu a 100W
Onye na-akwọ ụgbọ mmiri nke mmiri 100W
100W 30-50Vdc Voltage 480Vac LED Driver
240W 347V Ọkwọ ụgbọala na-enwu enwu
Onyenye na- enye nnukwu eletrik na-agba ọsọ eletrik na-esi na 40W ruo 240W nke na-arụ ọrụ site na 347Vac na Canada na 480Vac mains na United States. Ndị ọkwọ ụgbọala ndị a na-enye ohere dị mma ma rụọ ọrụ na nhọrọ ndị ọzọ maka njikwa ọgụgụ isi, nhọrọ...
Nkọwa: FD-150V-xx na-arụ ọrụ site na ntinye ndenye 180 ~ 525 Vac. Nkeji a ga-enye 4.2A nke mmepụta ihe ugbu a na volt voltage kachasị elu nke 143 V maka ike 150 W kachasị. A haziri ha iji rụọ ọrụ nke ọma na nke a pụrụ ịdabere na ha. Ụdị njirimara...
LED Luminaire akwa voltaji Ọkwọ ụgbọala
Obere Wallpack Light LED Driver
Fahold na- enye nnukwu elekere voltage eletriki ndị ọkwọ ụgbọala site na 40W ruo 240W na-arụ ọrụ site na 347Vac mains na Canada na 480Vac mains na United States. Ndị ọkwọ ụgbọala ndị a na-enye ohere dị mma ma rụọ ọrụ na nhọrọ ndị ọzọ maka njikwa...
Ọkụ ọkụ eletrik dị elu nke ọkụ ọkụ na-agba ọkụ 480V ọkwọ ụgbọala
Nkọwa: FD-40V-xxx na-arụ ọrụ site na oghere ndenye 180 ~ 528 Vac. Nkeji a ga - enye aka na 1.2A nke mmepụta ihe ugbu a na volta voltage kachasị elu nke 115 V maka ike 40 W kachasị. A haziri ha iji rụọ ọrụ nke ọma na nke a pụrụ ịdabere na ha. Ụdị...
Ọkụ ụgbọala ụgbọala 347V maka ọkụ ọkụ
Volta Voltage 480V Ọkwọ ụgbọala Ọkụ
China Alụlị Aluminom IP67 480V Ọkpụkpọ Ntanye Ngwa
Ezigbo ụlọ nke ndị ọkwọ ụgbọ ala 40-240W na-enye nkà na ụzụ na-eduga n'ịdị elu, mmezi ngwa ngwa na ịdabere na gburugburu ebe obibi. Site na ntinye ntinye ha, ezinụlọ a bụ ihe a na-ahụ maka ụdị ntinye na ntinye akwụkwọ. Enwere ike ịhazi ọwa ụgbọ ala Universal Everline LED ọ bụla iji mee ka mwepụta ha dị ugbu a ruo pasent 50% nke ọkwa ha kachasị elu. A na-akpọ ọrụ a ntanetị, ma ọ bụ, ndị ọkwọ ụgbọala LED. Ntụgharị na-enye ikike ịmepụta mmepụta ọkwọ ụgbọala ọhụụ nke dị ugbu a na ọkwa dị ala karịa ọkwa ya zuru oke. Mgbe onye ọkwọ ụgbọala na-ege ntị, ọ ka nwere ike ịme ka ọ ghara ịdị na-eme ka mmiri mmepụta dị ala na-ejide ntụziaka 0-10V. Ịgbanye onye na-akwọ ụgbọala na-adabere na ọkụ eletriki a na-eji eme ihe ọ bụla na-eme ka ọ dịkwuo mma, ọ na-emekwa ka ndụ nke ọkụ ọkụ. A na-echekwa ọrụ ntinye na ebe nchekwa ụgbọ ala ma ghara funahụ mgbe ewepụrụ ike. Ụlọ ọrụ kachasị na-emepụta ndị ọkwọ ụgbọala na-echere ihe kachasị elu ma ọ bụrụ na edeghị aha ha.
Ọhụụ Aluminom Didan Ọkụ Mmiri mmiri na-agba mmiri na-agba mmiri Onye na-akwọ ụgbọala Ọkwọ ụgbọala na-egbuke egbuke Ọhụụ na-ekpuchi ọkụ